Thuthukisa amafonti ku-Debian ngaphandle kwe-Infinality | Kusuka kuLinux
Thuthukisa amafonti ku-Debian ngaphandle kwe-Infinality
Emasontweni ambalwa edlule ngikukhombisile ukuthi kanjani thuthukisa ukushelela kwamafonti ku Debian usebenzisa i- Ukungapheli, futhi yize ukuthuthuka ecaleni lami kwakubonakala ngokusobala, ngabona ukuthi amafonti afinyelela eqophelweni lapho afiphele khona.
Chofoza isithombe bese usibona ngosayizi ogcwele. Kukhona enye indlela yokuthuthukisa ukulwa nokuqanjwa kwamafonti ku Debian ngaphandle kokufaka Ukungapheli. Izinyathelo yilezi ezilandelayo:
1- Sakha isipele sefayela le- .fonts.conf:
2- Sivula ifayela .fonts.conf bese silifaka ngaphakathi:
3- Sivala iseshini noma siqale kabusha ikhompyutha.
Lokho kufanele kwanele. 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Thuthukisa amafonti ku-Debian ngaphandle kwe-Infinality
Ngakho kuza lelo fayela kuCrunchBang lapho ukunikezelwa kuhle kakhulu.
Ukuthuthuka okutholakele kuyamangalisa
Yize ngokuya nge: http://wiki.debian.org/Fonts#Subpixel-hinting_and_Font-smoothing
«Amafonti okuzenzakalelayo ekusatshalalisweni okususelwe ku-Debian njenge-Ubuntu ne-Linux Mint anamafonti abukeka kangcono uma eqhathaniswa nokuminyaniswa okuzenzakalelayo kwe-Debian. Izinto eziningi mayelana nephakeji le-cairo zishintshile muva nje ku-wheezy nokungazinzile okulethe cishe ukusethwa kwefonti efanayo ku-Debian (Kepha hhayi Squeeze noma okudala) kepha kufanele ukusethe ngendlela othanda ngayo. Ungadala ifayela le- .fonts.conf kunoma iyiphi ifolda yasekhaya ye-akhawunti yomsebenzisi ukusetha lokhu. Ukupakisha nokwakha kabusha amaphakheji weCairo akusadingeki futhi. Isibonelo se- .fonts.conf ongangeza kwifolda yakho ye-akhawunti yakho yomsebenzisi ngaphandle kokushintsha enye into »
Njengamanje ngisebenzisa ama-Droid Sans eGroeze njengomthombo nokunikezwa kufana ne-elementaryOS.
Mmm ake ngizame .. ngoba i-Aller ibukeka yinhle.
Cha, i-Aller ibukeka ingcono kakhulu .. 😀
Ukuhumusha lokho okushiwo yiloo ndatshana:
Amafonti okuzenzakalelayo ekusatshalalisweni okususelwa ku-Debian okufana no-Ubuntu neMint anamafonti abukeka kangcono uma eqhathaniswa namafonti achazwe ngaphambilini ku-Debian Squeeze. Kuningi ngephakeji leCairo okushintshile muva nje eGroezy naku-Unstable, okucishe kube nazo zonke izilungiselelo zefonti zeDebian (kepha hhayi Squeeze nangaphambilini) kepha kufanele ukuvumelanise nezintandokazi zakho. Ungadala ifayili le-. Ukupakisha nokuhlanganisa kabusha amaphakheji weCairo ngeke kusadingeka. Isibonelo se- .fonts.conf ongangeza kufolda yasekhaya ye-akhawunti yakho yomsebenzisi ngaphandle kokushintsha enye into.
Ngamanye amagama, ku-Debian Squeeze akudingekile ukufaka okungapheli. Ukuhlela nje ifayela le- .fonts.conf kufolda ye-akhawunti yomsebenzisi ofuna ukuyinikeza kuzokwanela.
UFederico A. Valdés Toujague kusho
Ngikwenze kwi Wheezy yami neCinnamon noma i-GNOME-Shell nakuzo zombili lezi zindawo izingoma ziyamangalisa. Manje angimoneli ukubukeka okuhle kwamazwi avela kwamanye ama-distros. Ngiyabonga Elav !!!
Phendula uFederico A. Valdés Toujague
Bekungafanele ngenze noma yini ukwenza ukunikela kuka Wheyy wami kuhambisane namanye ama-distros, ngijabule kakhulu ngokunikezwa kwamanje.
U-Elav: Impela ukuthuthukisile ukubona kwami. Ngezibuko ezifanayo, ngibona zonke izinhlamvu - kufaka phakathi ezincane - zingcono kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu, iqiniso alizange lingikhathaze ngendlela ebelibukeka ngayo ngaphambili kepha manje limnandi nje 🙂
Ibuye isebenzele i-Archlinux kepha ifayili le-.
Ngiyabonga kakhulu ngethiphu. 😉
Kuthiwani uma sengivele ngafaka okungapheli futhi ngenza ukuguqulwa kwe- .fonts.conf?
Ngabe kufanele ibe se- $ HOME yethu okufanele siyenze / siyiguqule .fonts.conf?
Okwenzekayo manje ukuthi i-Infinality ifaka enguqulweni yayo yakamuva injini yeCFF, umphumela wokusebenzisana kwe-Adobe ne-Google Freetype version 2.4.12… .. ethembisa okuningi
Okukhazimulayo !!! Angizange ngifake amaphakheji angapheli afakwe ngu-Elav ngoba anginike ubunzima. Kepha lokhu ngizokwenza!
Siyabonga ngolwazi !!!!
Umbuzo: ekhelini lami. Ifayela lomuntu siqu .fonts.conf alikho (uma kukhona ifolda eqanjwe .fontconfig /)
Kepha bengicabanga ukuyakha nokubeka ikhodi lapho. Ngabe engizokwenza ngizokwenza okulungile noma ngabe ngitholwe ngokungafanele futhi akukho kufolda yami lapho lelo fayela litholakala khona?
Yibeke ngqo kufolda yakho yangasese.
Uzamile. Akulona ushintsho esilushoyo, ukuthi lukhulu kangakanani kepha luguquke kanjani, kepha luyakhombisa nokuthi luhle kanjani.
Siyabonga ngolwazi !!!
Elav, ngenze lezo zinguquko ku-fonts.conf kepha ngiyithande kangcono njengoba ibibukeka ngaphambili, unganginika isithombe-skrini sokuthandwa kde kohlelo> ukubukeka kohlelo> amafonti ukubona uhlobo nosayizi Yini oyilungisile uhlelo?
kulungile ngiyabonga, ngilungiselele ezinye izinhlobo zezinhlamvu, ngingazitholaphi lezo onazo futhi ngingazifaka kanjani? Ake sibone ukuthi ngaleyo nhlanganisela ngithuthukisa ukubukeka.
Ngiyabonga, bekukuhle kakhulu, kepha ngomthombo we-Ubuntu, ukuphela kwento engekho ku-Ubuntu eDebian.
U-Elav ku-Wheezy + Xfce yami esanda kukhishwa usanda kufaka i-Chrome lapho ngivula i-Gmail yami nokwethuka, kepha leyo ncwadi M yile. Ngakho-ke ngiyasesha futhi ngifika lapha. Ngenxa yesifundo sakho, eG Wheezy siyintombi nto futhi ngaphandle kwamafonti angeziwe ukuthuthuka okubonakalayo kwamafonti kube nesihluku.
Ngiyabonga, bengingazi ukuthi ifonti Aller, izongena esikhundleni sikaRoboto efonini yami.
Ukuhlola iskripthi ku-debian squeeze (yebo, ngisasebenzisa i-oldstable).
Ushintsho olungakholeki! Ukuthuthuka okuphawulekayo kuzinhlelo zokusebenza ze-Java.
U-Arnold Bric kusho
Sanibonani. Isebenza kahle noDebian Jessie.
Phendula u-Arnoldo Bric
Yenza kusebenze ngokuchofoza kwesokudla ku-HP Mini 210 Touchpad
Icedove: iklayenti le-imeyili elisiza ukuthuthukisa umkhiqizo emsebenzini